Ojiji nke biostimulants na nhazi nduku tubers tupu akuku. Anyị na-arụ ọrụ maka owuwe ihe ubi! - Magazin "Ụdị nduku"
в Agrotechnology, Ndụmọdụ ọkachamara, News, Akụkọ ụlọ ọrụ
Otu n'ime ụzọ dị mkpa nke ịkwadebe maka ịkụ poteto bụ ọgwụgwọ tubers na ihe nchebe na ihe na-akpali akpali. Ọrụ nke nnabata bụ ichebe osisi na-apụta site na ihe ndị na-emerụ ahụ (ọrịa na pests) ma nyere ya aka ịmalite ịmalite ịmalite na-eto eto ma na-eto eto. A na-emeso ihe ndị na-emerụ ahụ na tubers n'ụzọ dị mfe site na pesticides - chemical disinfectants, na uto usoro ga-enyere aka rụọ ọrụ uto stimulants dabeere na ihe sitere n'okike si malite, emejupụtara na mineral.
Mmetụta na-akpali akpali na akụkụ ihe ọkụkụ bụ isi nke phytohormones na-eto eto: auxin, cytokinin, gibberellin. Ha niile na-emetụta uto na nkewa nke mkpụrụ ndụ, usoro nke ịka nká na mgbanwe, njem nke ihe, respiration, njikọ nke nucleic acid, proteins, wdg N'otu oge ahụ, otu ọ bụla nke phytohormones nwere ọrụ nke ya: auxin na-ahụ maka ịmalite usoro uto; cytokinin - maka nkewa sel, mmụba nke olu nke usoro mgbọrọgwụ, nguzobe nke nodal (nke abụọ) mgbọrọgwụ; gibberellin dị mkpa maka ịba ụba nke ifuru na mfri nke ihe ubi.
Mmetụta nke auxins na mmepe nke usoro mgbọrọgwụ:
mmalite nke usoro uto;
mpụta nke tubercles mgbọrọgwụ;
uto cell na iche (ọpụrụiche ha).
Mmetụta cytokinins na mmepe nke usoro mgbọrọgwụ:
cell nkewa, mmụba na mgbọrọgwụ olu;
ogologo ndụ cell;
ụbara nnabata nke nri;
mmụba na ogologo na oke nke usoro mgbọrọgwụ nke isi na nke abụọ.
Ịhụ na nchekwa ihe ọkụkụ zuru oke ruo ogologo oge dabere na nhọrọ ziri ezi nke ihe nchekwa, mana ọ dịkwa mkpa iji biostimulator kwesịrị ekwesị. Ihe na-akpali akpali nke nwere ngwakọta kwesịrị ekwesị nke phytohormones, amino acids na nri na-enyere aka belata ịṅụbiga mmanya ókè nke osisi, na-eme ka germination nke tubers na enyi na enyi na-emepụta na ịmepụta usoro mgbọrọgwụ siri ike. Usoro mgbọrọgwụ mepere emepe nke ọma na-enye usoro nri nri ka mma maka osisi ahụ, nke na-enye ohere ịmepụta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ị ga-eme ka ọnụ ọgụgụ nke stolons na-abawanye, nke pụtara na ọ na-emetụta ọnụ ọgụgụ ya na ọnụ ọgụgụ buru ibu. àgwà nke ihe ubi, na, ya mere, arụmọrụ akụ na ụba nke na-eto eto nduku .
Super-Agro bụ ọkachamara na-ekesa fatịlaịza, agrochemicals na biostimulants. N'ịbụ ndị na-eduzi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụlọ nyocha na nyocha ubi na nyocha ntụle nke ịdị irè nke iji fatịlaịza dị iche iche na biostimulants na teknụzụ na-eto eto, ndị ọkachamara nke ụlọ ọrụ na-ahọrọ ngwá ọrụ agrochemical kacha mma maka ịkọ ugbo kpụ ọkụ n'ọnụ n'ụdị ha.
Maka ọgwụgwọ mbụ nke tubers nduku, anyị na-akwado iji ngwakọta nke disinfectants + Sprintalga (0,2 l / t) + Fulvumin (0,3 l / t) + Ikar Perfectstick (0,01 l / t). Atụmatụ a dị mma maka nhazi mbụ nke tubers site na igwe ihe ọkụkụ ọ bụla, gụnyere ogige ihe ọkụkụ ọkachamara GRIMME.
Sprintalga (Biolchim, Ịtali) bụ ọkachamara organo-mineral mgbọrọgwụ guzobe stimulator dabere na ukwuu ndọpụ wepụ (72%) nke Macrocystis, Ascofillum nodosum na Sargassum oké osimiri. N'ihi usoro ya pụrụ iche, Sprintalga na-enye nnukwu ihe ndị na-arụ ọrụ ndụ (betaines, alginic acid, ihe ndị na-achọpụta ihe na homonụ uto eke) na amino acid nke na-akpali metabolism nke mbụ ma na-ebuli nguzozi nke hormonal na mgbọrọgwụ ndị ntorobịa. N'ihi ya, Sprintalga na-akpali nguzobe ngwa ngwa na ịgbatị mgbọrọgwụ.
• Phytohormones auxin na cytokinin na-ahụ maka usoro uto (nkewa cell, uto na ọdịiche), na-akpali nhazi na uto nke mgbọrọgwụ, kwalite metabolism.
• Polysaccharide alginic acid na-emetụta usoro nke ijigide mmiri na mgbọrọgwụ, nke mere ka uto nke usoro mgbọrọgwụ dịkwuo mma.
• Betain bụ ihe dị mkpa na-arụ ọrụ nke usoro metabolic. Ọ na-eme ka njikọ nke phospholipids nke membranes cell rụọ ọrụ, na-enwe ike ịbawanye ike ha na mmiri, na-eme ka ọrụ photosynthetic nke osisi dịkwuo elu ma kwalite iguzogide biotic na abiotic stress.
• Amino acids na-etinye aka na biosynthesis nke protein structural, na-akwalite nnabata nke nri nke ọma, na-abawanye nguzogide nrụgide nke osisi na nrụgide abiotic, ọrịa fungal ma na-ewusi ike ha ike.
• Micro-, meso- na macroelements (N, P, K, Mg, S, Fe, Zn, B) n'ụdị usoro nke algal nkwusioru na-ngwa ngwa assimilated, na-akpali ndị isi metabolism nke osisi, na-ebuli nri na mgbọrọgwụ sistemụ.
Ihe niile mejupụtara ihe na-akpali akpali nke mgbọrọgwụ Sprintalga nọ na nguzozi nke ọma ma na-akwado ibe ya, n'ihi nke ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma ọbụlagodi na ọnọdụ okpomọkụ na-adịghị mma maka uto nke sistemụ mgbọrọgwụ.
Fulvumin (Biolchim, )tali) nwere n'ime ihe mejupụtara ya 28,8% fulvic acid, yana mgbagwoju anya nke polysaccharides sitere na ahịhịa mmiri. Achọpụtala ọrụ physiological nke fulvic acid dị ka antioxidants (mwepụ nke ịṅụbiga mmanya ókè mgbe ọgwụgwọ pesticide gasịrị) na ihe na-akpali akpali (n'ihi ọnụnọ nke otu ndị na-arụ ọrụ dị ka phytohormones). Na mgbakwunye, acid fulvic bụ akụkụ kachasị ike nke ihe humic, nke na-enwe mmetụta mgbaze na ogige ịnweta n'ime ala, na-atụgharị ha ka ọ bụrụ ụdị nwere ike ịnweta osisi. Polysaccharides bụ isi iyi nke carbon nhazi, nke a na-etinye ngwa ngwa na metabolism nke mkpụrụ osisi, na-abawanye ike uto ha na iguzogide ihe ọjọọ.
Ikar Perfectstick (IKAR, Lithuania) bụ ọkachamara na-arụ ọrụ nke pesticides na agrochemicals dabere na siloxane ejiri polyester gbanwee. Ọgwụ a na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ị na-emepụta ihe ọkụkụ nduku, ọ na-eme ka mmetụta nke ọgwụ ndị ị na-eji (PPP, ihe na-akpali akpali, microelement complexes), nke a na-eme n'ihi ntinye ngwa ngwa nke ọgwụ na-eji n'ime osisi ahụ ma na-enye aka na mgbatị dị ịrịba ama. nke omume ya. Ugbu a, iji welie mmetụta ahụ, ịkwesighi ịbawanye usoro onunu ogwu.
Mgbakwunye nke onye na-eme ihe na ngwọta na-arụ ọrụ na-emetụta n'ụzọ dị ịrịba ama njirimara anụ ahụ ya, na-ebelata ike esemokwu elu. Ekele maka iji Perfectstick na usoro onunu ogwu nke 10-12 ml kwa 100 lita, a na-etipịa ihe ngwọta na nozzles n'ime obere tụlee mgbe a na-efesa ya. Ozugbo n'elu ebe a na-emeso ya, ha na-agbasa ngwa ngwa n'elu ya, na-enye mkpuchi zuru oke. N'ihi na fluidity na lipophilicity nke ngwọta, ọtụtụ n'ime mmiri mmiri na-etinye obi gị dum n'ime tubers ma ọ bụ akwukwo mesophyll ugbua atọ nkeji mgbe ọgwụgwọ, malite na-arụ ọrụ ike. N'ime adjuvant niile anyị maara, Perfectstick nwere ike ịbụ ihe kacha sie ike ịbanye.
Polyester, nke bụ akụkụ nke Perfectstick activator, na-anọgide n'elu akwụkwọ ahụ ma, mgbe ọ gbasiri ike, na-emepụta ihe nkiri hydrophobic dị mkpa nke na-echebe ihe ngwọta nke fọdụrụ n'elu ka ọ ghara ịsacha ya site na mmiri ozuzo, na akwụkwọ nke osisi ahụ site na mmiri ozuzo. ihicha na germination nke spores nke pathogenic fungi.
Ojiji nke Perfectstick na usoro onunu ogwu nke 10 ml kwa ton nke osisi na-enye ọ bụghị naanị mkpuchi elu, kamakwa ntinye ngwa ngwa nke ngwọta n'ime anụ ahụ nke mkpụrụ na tubers, nke mere na ịdị irè nke iji uwe, ihe na-akpali akpali na kemịkal. usoro nchebe na-ebili n'ọkwa ọhụrụ. N'otu oge ahụ, Perfectstick na akwadoro dosages adịghị enwe mmetụta depressant na osisi ma na-eje ozi dị ka isi iyi nke silicon (Si), ihe dị mkpa Chọpụta mmewere na-abawanye n'ibu ike nke cell mgbidi na enhances eke nchebe nke osisi si ekpo oke ọkụ. na ultraviolet radieshon.
N'ihi ngwa ngwa ya dị ala yana arụmọrụ dị elu, Icar Perfectstick bụ ezigbo ngwọta maka imeziwanye ogo ọgwụgwọ pesticide systemic na ngwa foliar.
Ya mere, ọgwụgwọ nke tubers tupu akuku na ngwakọta nke SPRINTALGA + FULVUMIN + IKAR Perfectstick kwesịrị ịghọta dị ka otu n'ime ụzọ kachasị dị irè nke na-akpali usoro mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ, nke na-enye aka na nri kwesịrị ekwesị nke ihe ọkụkụ na-eto eto n'oge ntorobịa. uto na mmepe.
Usoro ọrụ ugbo a na-enye:
- ịba ụba ike nke germination nke tubers;
- inweta ome mbụ na enyi;
- uto ngwa ngwa na mmepe nke usoro mgbọrọgwụ siri ike;
- nhazi nke ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke ị ga;
- oke kachasị dị n'etiti ala ala biomass;
- mma absorption nke mmiri na nri site na-akpata usoro;
- na-abawanye mgbochi na iguzogide osisi na ọrịa na nrụgide ibu.
Tags: biostimulants na-eto etoIcarus PerfectstickSprintalgaSuper-AgroFulvumin
Elite mkpụrụ poteto dị mkpa na mpaghara Arkhangelsk
Banyere ọnụ ahịa nduku na Septemba 2019